Teknolojia · Janoary, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Teknolojia · Janoary, 2011
Tantara mikasika ny Teknolojia tamin'ny Janoary, 2011
Ejipta: Ao amin'ny Twitter, ny fikarohana an'i Wael Ghonim
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Janoary 2011
Ao amin'ny Twitter, maneho ny ahiahiny mikasika ilay Ejiptiana mpitoraka bilaogy sady mpitantana ny Google Middle East, Wael Ghonim, izay tsy hitananomboka ny Alakamisy 27 Janoary tao anatin'ny fihetsiketsehana tao Cairo ireo namany .
Azia Atsinanana 30 Janoary 2011
Tontolo Arabo : Media vaovao sy ny fanehoan-kery ataon'ny Ejiptiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Janoary 2011
Miandry am-panahiana izay mety ho fivoaran'ny toe-draharaha any Ejipta ny tontolo Arabo. Androany, naka sisiny ny media mahazatra hatramin'izay fa ny media an'ny vahoaka no mahazo laka. Raha mitana toerana lehibe ny media vaovao hanehoan'ny vahoaka ny heviny, dia manana ny anjara toerany lehibe koa ny fampitana vaovao amin'ny fomba...
Siria: Mpampiasa Aterineto Mirohotra Manohana Ireo Ejiptiana Mpanao Fihetsiketsehana
Raha mbola misonga miakatra hatrany ny haromotan'ny hetsika handrodànana ny fitondran'i Mubarak ao Ejipta, manao izay ho afany hanohanana ny mpanao fihetsiketsehana amin'ny lafiny rehetra ny Siriana.
Madagasikara : Mba azonao atao sariitatra koa ve ny fanaovan-gajety?
Afrika Mainty 27 Janoary 2011
Ny mpiblaogy Bunmi (monina any Etazonia) no mitatitra fa i ‘Madagascar’ izay sangan'asan'i Bastien Dubois dia isan'ireo lahatsaritatra voafantina hifaninana amin'ny Oscar 2011, taranja sariitatra fohy (ndlr. fifaninanana sarimihetsika vovònana izay tanterahina isan-taona any Amerika).
Haiti: Fisamborana tsy ho ela an'i Duvalier?
Karaiba 19 Janoary 2011
Efa talohan'ny tamin'ny iraikambinifolo ora io maraina io, rakotry ny sahoan-dresaka ny Twitter fa hoe i Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier, ilay mpanao jadona taloha voaozona nitsoak nialokaloka tany Frantsa ary niverina tampoka tany an-tanindrazany tamin'ny Alahady alina, dia tratry ny fepetra fampisamborana.
Zeorzia: Polisy noroahina taorian'ny nahafantarana azy tamin'ny Facebook
Azia Afovoany sy Kaokazy 17 Janoary 2011
Taorian'ny hery tafaohatra nataon'ny polisy hanimbana ny fihetsiketsehana tany Tbilisi, Zeorzia, maro ny mpampiasa Facebook no nampiasa ny tranonkala hamantarana ireo tompon'andraikitra.
Mpandika teny misongadina: Sarah Standish
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Janoary 2011
Tanora Amerikana mpampianatra sy mpitoraka bilaogy manana anton-draharaha i Sarah Standish. Ankoatry ny fampianarany ny teny Arabo ireo mpianatra eny amin'ny kolejy any Etazonia, manantena ity mpikambana ao amin'ny Lingua Arabo ity fa hanangana tetezana eo amin'ny Andrefana sy Atsinanana ary hampisy fifankahazoana bebe kokoa ny fomba fiainana Arabo sy ny fisainany. Nanadihady azy tao anatin'ity lahatsoratra ity i Shams Ahmad.
Malezia: Mamaly Fanontaniana ao amin'ny Twiter ny Praiministra
Azia Atsinanana 13 Janoary 2011
Ny tenifototra #tanyanajib, izay midika hoe ‘anontanio an'i Najib’ amin'ny teny Malay, dia lasa lohahevitra ifanakalozana ao amin'ny twitter tamin'ny Talata lasa teo. Izany dia mifandraika amin'ny filazàn'ny Praiministra Maleziana, Najib Razak fa hoe hamaly ioreo fanontaniana alefan'ny mponin'ny aterineto ao amin'ny twitter izy.
Tonizia: Resaka fanonganam-panjakana, tsaho fotsiny
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Janoary 2011
Vao maraina be ny Alarobia 12 Janoary, niparitaka toy ny vanja nipoaka tao amin'ny Twiiter ny vaovao hoe nisy fanonganam-panjakana tany Tonizia. Voamarina ankehitriny fa tsaho ilay tatitra - naelin'ny eritreritr'ireo Toniziana izay nitsangana nanohitra ny fitondran'i Ben Ali nanomboka tamin'ny tapaky ny volana Desambra.